Tipu CCI - ညွှန်ပြချက် - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Tipu CCI – ညွှန်ပြချက်
Tipu CCI – ညွှန်ပြချက်
သြဂုတ် 12, 2019
int iSignal = iCustom(_Symbol,_Period,"Tipu CCI","",14,PRICE_TYPICAL,0,0,"",1,5,clrNONE,clrNONE,"",မမှန်သော,မမှန်သော,1,မမှန်သော,မမှန်သော,မမှန်သော,4,0);
int iTrend = iCustom(_Symbol,_Period,"Tipu CCI","",14,PRICE_TYPICAL,0,0,"",1,5,clrNONE,clrNONE,"",မမှန်သော,မမှန်သော,1,မမှန်သော,မမှန်သော,မမှန်သော,5,0);
bool bBuy = iCustom(_Symbol,_Period,"Tipu CCI","",14,PRICE_TYPICAL,0,0,"",1,5,clrNONE,clrNONE,"",မမှန်သော,မမှန်သော,1,မမှန်သော,မမှန်သော,မမှန်သော,6,0);
bool bSell = iCustom(_Symbol,_Period,"Tipu CCI","",14,PRICE_TYPICAL,0,0,"",1,5,clrNONE,clrNONE,"",မမှန်သော,မမှန်သော,1,မမှန်သော,မမှန်သော,မမှန်သော,7,0);
Tipu CCI – indicator isaMetatrader4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Copy Tipu CCI – indicator.mq4 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
How to remove Tipu CCI – indicator.mq4 from your Metatrader4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးRSISignal - ညွှန်ပြချက်
Next ကိုဆောင်းပါးColor MACD - ညွှန်ပြချက်